सायद सरकारले अब भन्नेछ– ‘जनताको अभूतपूर्व समर्थनका कारण लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय गरिएको छ।’ जसरी सुरुमा डरले आफैँ घर बसेको कुरालाई उसले भनेको थियो– ‘जनताले लकडाउन सफल पार्न अभूतपूर्व साथ दिएका छन्।’ वर्षाैंपहिले भूतपूर्व हुनुपर्नेहरू पदमा भएपछि सबै कुरा अभूतपूर्व देख्छन् नै !
सायद अब सरकारसँग ‘खुला समाज’ फेस गर्ने हिम्मत नै बाँकी छैन। साढे दुई वर्षको अकर्मण्यता, दर्जनौँ काण्ड, दुई महिनाको लकडाउनमा प्रदर्शित कोरोना नियन्त्रण र अब कसरी खोल्ने भन्नेमा शून्य सिर्जनशीलता, पार्टीबाटै कुनै पनि दिन सरकार फेर्न प्रयास हुने त्रास– लकडाउन खोलेर यो सबै कसरी फेस गर्नु !
प्राकृतिक सौन्दर्यका बहुल अभिव्यक्तिमध्ये मान्छेको अनुहार एक हो। कोरोनाले अहिलेका लागि धेरैको सुन्दर रूप मास्कमार्फत ढाकेको छ। जसका आँखा (वा आँखा मात्र) राम्रा छन्, तिनलाई फाइदा भएको छ। अहिले कोरोनामा मास्कसहित परिचित हुन पुगेका मान्छेलाई कोरोनापछि चिन्न नसकिने जोखिम त्यत्तिकै छ।
राष्ट्रवादः शब्दको अर्थ जनताले बनाउने हो, परम्परामार्फत। शब्दकोशले लिपिबद्ध गर्ने मात्र हो। जनताले जहिले शब्दको अर्थ फेर्न सक्छन्। पहिले निरंकुश शासकले बदनाम गराए, अहिले मधेशी, महिला र ‘अन्य’बाट राष्ट्रियतामा खतरा छ भन्नेले। तसर्थ बहस शब्दका अर्थमा होइन, अर्थ किन फेरिन्छन् भनेर गरौँ।
कसैले म फलानो राजनीतिक÷सामाजिक मुद्दाका लागि जेल बसेको÷लडेको मान्छे भनेर आफैँ भन्न थाल्छ भने यति प्रस्ट बुझे हुन्छ– उसले त्यस लगानीको मैले प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्न खोजेको हो। लड्ने त आफ्नो हिसाबले, आफूले देखेको न्यायका लागि, आफ्नै लागि पो हो। त्यो ‘कसैका’ लागि होइन।
भनेपछि, जसरी कोभिड–१९ किन आएको हो भन्ने कसैलाई थाहा छैन, त्यसरी नै यो कहिलेसम्म हामीबीच रहनेछ भन्ने पनि कसैलाई थाहा छैन। जिन्दगीमा अरू कुरा यही माथिका कुराका ‘फुटनोट’ हुन्।
कोरोना लामै समयसम्म हाम्रो यथार्थ भएर रहनेछ भन्ने कुरा अब सामान्यज्ञान भयो। लकडाउन तत्कालको एउटा उपाय थियो। संसार अब कसरी पुनः खुल्ने भने चरणमा गएको छ। नेपालले पनि अब लकडाउन मोडालिटीमा निर्णय गर्दा यो यथार्थलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। खोल्नु नै छ भने हठात्भन्दा योजनासहित खोल्नु राम्रो !